Barclays Bank Muxuu ka Yaqaanaa Dahabshiil? | Salaan Media
Barclays Bank Muxuu ka Yaqaanaa Dahabshiil?
Dhaqaalaha dunidu waxa uu ku salaysan yahay dal wabilba sida uu wax-soo-saarkiisu yahay oo salka ku haysa xagga aqoonta bulshadaasi leedahay iyo ganacsiga furfuran ee xorta ah. Soomaaliya waxay ka mid ahayd waddamadii Afrika ee dhaqaalaha fiican haystay ka hor intii aanay burburin dawladdii milatariga ahayd ee Maxamed Siyaad Bare hoggaaminayey. Waxyaabaha ugu badan ee ay ka soo xaroon jireen ilaha dhaqaaluhuna waxa ka mid ahaa xoolaha nool iyo wax-soo-saarkii beeraha oo meel fiican marayey.
Haseyeeshee waxay labadaasiba hoos u dheceen kadib dagaalladii dalka ka dhacay 1991-kii, laguna riday maamulkii Maxamed Siyaad Barre, balse labadaaba waxa Soomaalida kaalintoodii u galay shirkadaha xawaaladaha oo uu ugu horreeyo kambaniga caanka ah ee Dahabshiil Groups oo ka mida sababaha uu Ilaahay ku badbaadiyey dad badan oo Somaliyeed, kuwaas oo ay shirkadda Dahabshiil ka caawisay dhinacyada dhaqaalaha, nolosha qoysaska danyarta ah oo haddii aanay Dahabshiil jiri lahayn in badan oo ka mid ahi soo gaadheen heerka ay maanta taagan yihiin.
Tusaale ahaan haddii aan soo qaadano abaarihii Soomaaliya ka dhacay sannadkii 2011-kii shiraddu waxay qayb weyn ka qaadatay gurmadkii lagu samato bixinayey dadkii kumanaanka Somaliyeed ahaa ee ay ku dhufatay abaartaasi argagaxa weyn ku ridday dunida oo dhan, waxaanay shiraddu gurmadkaasi ku bixisay lacag dhan $150,000 Dollar-ka Maraykanka ah.
Masiibadii daadadka fatahaadda webiga Shabeelle ku dhufatay magaalada Balladweyne ee xarunra Gobolka Hiiraan oo dad badan ku qaaday hanti ganacsi iyo guro badana ku burburiyey inay shirkadda Dahabshiil kaga qaybqaadatay lacag dhan $1,000,000 Dollar oo isugu jiray raashin la siinayey dadkii barakacayaasha ahaa iyo lacago caddaan ah intaba.
Sidoo kale, markii ay abaarta kululi ku dhacday Somaliland sannadkii 2010-kii shirkadda Dahabshiil waxay kaga qaybqaadatay gurmadkii biyaha iyo raashinka lagu gaadhsiinayey dadkii ay abaaruhu saameeyeen lacag dhan $150,000 Doollar.
Waxa kale oo aynu la wada soconaa kaalinta fir-fircoon ee ay shirkaddu kaga jirto kobaca arriamaha caafimaadka iyo waxbarashada iyo dhiirigelinta Jaamacadaha dhulalka Soomaalidu degto, gaar ahaan kuwa Somaliland oo ay badhitaarto horumarkooda iyada oo siisa lacago, isla markaana u dhista qaybo ka mid ah dhismayaasha ay ardaydu wax ku bartaan iyo lacago badan oo ku bixiso qabsoomida xafladaha loo dhigayo ardayda ka soo qallinjabisa Jaamacadaha.
Shirkadda Dahabshiil waa shirkad madaxbanaan oo gaar loo leeyahay waxaanay soo shaqaynaysa ilaa iyo 40kii sano ee la soo dhaafay waxaanay ka shaqaysaa adeegyada xaasaasiga ah ee la xidhiidha kobcinta dhaqaalaha bulshada Somaliyeed meel kastaba ha joogaane sida xawilaadaha lacagaha oo aynu odhan karno waa laf-dhabarta 1aad ee ay maanta qoysaska Somaliyeed ku tiirsan yihiin.
Waxa kale oo ay shirkaddu ka shaqaysaa sarrifka lacagaha, isgaadhsiinta telefoonada iyo intertnet-ka casriga ah ee dunida isku keenay maanta, kuwaas oo intaba shirkaddu ku hogaaminaysay dhammaan ganacsiga kale ee noocan oo kale ah ee ka jira gudaha Soomaaliya iyo xataa waddamada Afrika oo dhan oo sida la ogyahay ay Dahabshiil tahay kambaniga ugu weyn ee xagga xawilaadda lacagaha iyo sarrifka.
Dhanka kalena, shirkadda Dahabshiil waxay leedahay qayb Bangi ah oo ay dadku lacagaha dhigtaan si dhibyarna uga qaataan, hadba halkay joogaan iyaga oo aan wax dhibaato iyo musuqmaasuq ah toona ku qabin adeeyada kala duwan ee ay shirkaddu bixiso, xarumaha Baananka Dahabshiil meelaha ay hadda sida fiican uga shaqeeyaan waxa ka mid ah waddamada Jabouti iyo Somaliland.
Shirkaddu waxay adeega bangiga ama kaydinta lacagta ku soo kordhisay nidaam casri ah oo ay dadku kula socon karayaan dhaqdhaqaaqa xisaabeed ee is bedallada Akoonadooda uga furan Dahabshiil, kuwaas oo aanay lahayn shirkadaha kale ee lacagaha xawilaadaha ka shaqeeya, waxaanay dadku ogaan karaan haddii akoonadooda kala baxdo lacag oo farriin telefoonkaaga gacanta laguugu soo qorayo “akoonkaaga waxa laga saaray lacag dhan —” haddii aad sidoo kale lacag dhigatana waxa uu ku odhanayaa “akoonkaaga waxa lagu shubay lacag dhan intaa iyo intaa.” Taasina waa nidaam casriya oo dadka siinaya kalsooni buuxda in aanay lacagahooda cid aan iyaga ahayni kala bixi karin akoonada ay ku leeyihiin Dahabshiil.
Bangiga Dahabshiil qaybtiisa Hargeysa oo hadda dhismihiisu dhammaad ku dhawyahay, kaas oo noqonaya dhismaha ugu wayn Somaliland iyo Soomaaliya, waxa uu noqon doonaa xarunta Dahabshiil Baanka. Sidoo kalena waxa hadda shirkaddu ka wadaa caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho dhisme wayn oo kan oo kale ah oo laga dhigi doono xarunta Muqdisho ee Dahabshiil Bank.
Shirkadda xawaaladaha lacagaha iyo sarrifka ee Dahabshiil waxay xarumo ku leedahay in ka badan 157 dal oo ka mid ah waddamada adduunka, waxaanay bulshooyinka kala duwan ee waddamadaas ku nooli si hagar la’aan ah ugu naaloonayaan adeega hufan ee tayada leh ee ay bixiso shirkadda caalamiga ah ee Dahabshiil Groups. Arrintaasina waxay keentay inay dadka Somaliyeed ee dunida daafaheeda ku kala firidhay si dhibyar ula soo xidhiidhaan eheladooda iyo qaraabadooda ku nool caasimad ilaa iyo tuulo, kuwaas oo si joogto ah ugu xidhan xarumaha Dahabshiil.
Haddii aad gudaha u gasho xarumaha xawilaadda lacagaha ee Dahabshiill waxay indhahaagu markiiba qabanayaan dadweyne tiro badan oo safaf dhaadheer ugu jira qaadashada lacago looga soo diray dunida daafadeeda ama u diraya kuwo kale oo meelo kale jooga.
Qofka Soomaaliga ah ee ku nool meel ka baxsan magaalooyinka waaweyn ee ay Soomaalidu degto sida degmooyinka iyo tuulooyinka yaryar ee hoosyimaada oo kale markay doonanayaan lacagaha ay eheladoodu dibadaha uga soo direen uma baahna inay soo aadaan magaalooyinka waaweyn, basle waxay tallaabo yar uun u qaadayaan ama tagayaan hadba xarunta ugu dhaw ee ay leedhahay shirkadda Dahabshiil.
Shirkaddu waxay caan ku tahay inay dadku lacagahooda u helaan sida ugu horreysaba marka ay ehelleadoodu u soo diraan oo aanay waqti dheer ka qaadan, waxaanay shirkaddu samasyay hab casriya oo ay si dhibyar dadka ugu soo gudbiyso markay lacaguhu dibadaha uga soo dhacaan, iyaga oo farriin qoraal ah telefoonada gacanta ugu soo gudbisa in lacag loo hayo “fadlan kaalay Dahabshiil lacag baa kuu taallee,” taasina waxay meesha ka saartay baahidii ahayd inay dadku tagaan Dahabshiil oo ay wadiiyaan in loo soo diray lacag iyo inkale.
Dhinaca kale, shirkadda waxa u shaqeeya dadka ugu tirada badan ee u shaqeeya shirkad keliya oo gaar loo leeyahay Somaliland iyo Soomaaliya guud ahaanba, waxaana lagu qiyaasaa inay kor u dhaafayaan ilaa hal malyan iyo badh marka laysku wada geeyo tiradooda.
Dahabshiil kambani waxa uu caan ku yahay inay xafiisyadiisu dadweynaha ka adeeganaya u furan yihiin xilliyo ka badan inta ay furan yihiin kuwa shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawilaadaha lacagaha, tusaale ahaan Dahabshiil waa shirkadda keliya ee ay xafiisyadeedu adeegga dadweynaha u furan yihiin maalintii oo dhan 7 subaxnimo ilaa iyo 5:30 galabnimo intayar ee la qadaynayo duhurkii ama salaadaha Duhur iyo Casar la tukanyo mooyee. Haddii loo baahdana xarumaha xawilaadaha lacagaha ee Dahabshiil waxay furan yihiin waqtiyo dheeraad ah sida xilliyada munaasibadaha ciidaha bisha barakaysan ee Ramadaanta oo kale.
Geesta kale, Dahabshiil waxa uu xidhiidh toos ah la leeyahay Bangiyada waaweyn ee caalamka oo uu wadashaqayn iyo hab-xisaabeedyo lacagaha laga diro ku leeyahay dunida oo dhan, kuwaas oo shirkadda u sahlaya in aanay hakad iyo cidhiidhi toona gelin shaqada xawilaadda lacagaheeda u yaala waddamada kale, tusaale ahaan waddanka UK oo kale waxay Dahabshiil xidhiidh la leedahay Bangiyo kala duwan oo uu ka mid yahay Bangiga Braclays oo hadda doonaya inuu joojiyo wadashaqayntii uu lahaa xawaaladaha.
Haseyeeshee, go’aanka Baanka Braclays waxba uma dhimayo dhaqdhaqaaqii xawaaladda lacagaha ee Dahabshiil, waxaana u furan shirkadda inay xidhiidh wadashaqayneed si dhibyar ula furato bangiyada kale ee dalkaasi ku yaal, iyadoo aanay marnaba wax caqabad ahi ku iman doonin shaqada xawilaadda lacagaha ee shirkaddu u hayso dadweynaha.
“Dadweynaha Somaliyeed waxaan u sheegaynaa inaanay ka warwarin inaanu UK uga soo dirro lacagahooda hadii uu Baanka Braclays xidho akoomada Dahabshiil ku leedahay waxaannu heli karnaa Bangiyo kale oo ku yaal dalka UK oo aannu haddaba xidhiidh la leenahay shaqadayaduna maaha mid ku joogsanaysa Baanka Braclays oo kaliya.” Sidaa waxa yidhi Maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil Mr. Cabdirashiid Maxamed Siciid Ducaale oo ka hadlayey dhawaaqa Baanka Braclays uu ku hanjabay inuu joojinayo la shaqaynta xawaaladaha Soomaalida.
Sidaa darteed haddii uu Baanka Braclays ku adkaysto inuu joojinayo xidhiidhka uu la leeyahay xawaaladda Dahabshiil waxay la mid noqonayaa uun maahmaahdii Somaliyeed ee ahayd “nin shir ka kacay siigayare,” taas oo macnaheedu yahay inaanay Dahabshiil u dhutin doonin wadashaqayntii Baanka Braclays uu la lahaa xawaaladda Dahabshiil, balse ay ku xidhan tahay bangiyo badan oo kale oo caalami ah, kuwaas oo diyaar u ah inay la shaqeeyaan Dahabshiil horena ula shaqayn jiray, haddana la shaqeeya.
Taas awgeed waxaaba iska yar inta uu Baanka Braclays Dahabshiil wax ka yaqaano, guntii iyo gabogabadii waxaan leenahay “Braclays Bank muxuu Dahabshiil ka yaqaanaa?”
FAALLO: Weriye Xadiis Maxamed Xadiis